TAFIKA MALAGASY: NAHITAM-BOKANY NY FITAOVANA NATOLOTRY NY FILOHA ANDRY RAJOELINA
On mai 8, 2019 665
Soratra Andry Rakotonirainy
20 volana Mey izao no farany ahafahan’ny rehetra mamerina ny fitaovam-piadiana izay tsy nahazoana alalàna, dila ny fe-potoana dia tsy handefitra intsony ny Tafika sy ny mpitandro filaminana fa hampihatra avy hatrany ny sazy.
Teny amin’ny Minisiteran’ny fiarovam-pirenena Ampahibe ny 07 mey teo no nitatitra ny dingana vitan’ny Tafika naparitaka nanerana ny Nosy ny jeneraly, Rakotonirina Léon Richard. Nandritra ny roa volana, nahatratra 267 ireo omby tafaverina, basy 112 no azo, misy amin »izy ireny ny basy vita sinoa, sy vazaha ary vita gasy . mpitandro filaminana telo no maty , ny iray zandary ary ny roa miaramila. Voalaza fa bala « traçante » no nahafaty azy ireo, izay fantatra fa avy ao aminny Tafika ihany. Efa mandeha ny fanadihadihana ary ho fantatra tsy ho ela ny tena mpiray tsikombakomba amin’ny Dahalo.
Nnisy koa ny famotsorana ny olona miisa 24 nalaina ankeriny. Misy tamin’ ny lasibatra no nalaina ankeriny noho halatromby, ny hafa dia andiany fakana ankeriny tsotra.
Tsy mitsahatra hatreo ny ezakin’ny tafika Malagasy, mitohy amin »ny fametrahana tafika any amin’ny toerana tena mafana amin’ny asan-dahalo, efa nahatratra 1600 ireo miaramila efa naparitaka tamin’ny faritra hita fa misy asan-dahalo.
Hamafisina izany fa tsy mijanona ho iray volana intsony izy ireo, fa hijanona tanteraka amin’ny toerana misy azy. Nanampy betsaka ny tafika Malagasy rahateo ny fitaovana, toy fiara tsy matahon-dalàna , ny angindim-by natolotry ny filoha ny Repoblika, Andry Rajoelina.
Ny eto andrenivohitra dia mitohy ny fametrahana ireo PM (Police Militaire ).
ANDRY RAJOELINA: TSY HANIKY LEMBENANA AMIN’NY FAMBOTRIANA NY FIRENENA MALAGASY
COOPERATION CHINE MADAGASCAR: LA CULTURE A L’HONNEUR